Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguConcetta
2 amagumbi okulala amabini afakwe kakuhle kwaye aqhakazile, ubuhle bomhlaba kwiDolomites kunye nePrealps. Igumbi lokuhlambela labucala. Iyafumaneka ukuba kukho ibhedi yeentsana kunye / okanye abantwana. Igumbi lokutyela elikhululekileyo lesidlo sakusasa ligcwele kunye noko likufunayo. Le ndlu ikwanayo ikhitshi esetyenziselwa iindwendwe kuphela, ukubavumela ukuba batye izidlo zabo ngokuzola okupheleleyo kunye nokhuseleko kweli xesha likaxakeka. Kukwakho negadi enefenitshala etofotofo onayo
Indlu uthatha ngaphezu ezimbini imigangatho, kumgangatho wesibini, kukho 2 okulala kunye lokuhlambela, ngolokuqala, okudlela igumbi kunye emnyango kwaye kumgangatho ophantsi, ikhitshi kunye umyezo obutofotofo. Ententeni, egadini ukuze amava amangalisayo !! Ndihlala ngaphakathi kwindlu, kodwa kwindlu eyahlukileyo, kuphela indawo yokungena ekwabelwana ngayo.
4.80 · Izimvo eziyi-30
Indawo yendlu icwangciswe ngobuchule! Amanyathelo ambalwa ukusuka kwindawo encinci yokuthenga enevenkile enkulu, ivenkile yekofu, i-ice cream parlor kunye nokuthatha i-pizzeria, indawo yokwenza iinwele, i-launderette kunye nevenkile yempahla. Ukutyelela kungenxa yesikwere saseMel, apho uya kufumana ikhemesti, i-newsstand kunye neminye imisebenzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Concetta
Ubukho bokusetyenziswa simahla kwegumbi lokugcina iibhayisekile okanye ezinye izinto.Ndiya kufumaneka kulo naluphi na uhlobo lwengxaki okanye imfuno yoncedo neengcebiso. Ukususela kulo nyaka kukho iindaba ezimnandi kubantwana bakho: ukuba nokwenzeka kokulala egadini kwintente ekhululekile exhotyiswe ngamava akhethekileyo !!
Ubukho bokusetyenziswa simahla kwegumbi lokugcina iibhayisekile okanye ezinye izinto.Ndiya kufumaneka kulo naluphi na uhlobo lwengxaki okanye imfuno yoncedo neengcebiso. Ukususela…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mel